Vatori vechikamu vemutambo wesainzi nehunyanzvi hwekugadzira kwevana nevechidiki "Kubva kuVinta!" (inoshanda pasi peshumiro yebazi rezvemaindasitiri nekutengeserana kweRussia) yakaratidza zviitiko zvavo zvinovimbisa kumusangano wepasirese wakasarudzika wemichina yekurima AGROSALON-2020. Iwo mapurojekiti akafarirwa kwazvo nenhumwa dzehurumende dzakatungamirwa neMutevedzeri weGurukota Yuri Borisov.
AGROSALON 2020: akakosha manhamba
Tinokukoka iwe kuti ushanyire panomira magazini ye "Potato System" ku "AGROSALON" kuratidzwa
Sekureva kwaIgor Gryzlov, Development Director weFixar, iyo yakavhurwa isina kumisikidzwa mota inosanganisa zvakanakira copter nendege uye inokwanisa kuita rakasiyana basa mune zvekurima.
Pamusoro pezviitiko izvi, vatori vechikamu vemutambo uyu vakaunzawo pakuratidzira zvishandiso zveZarya zvekuuraya hutachiona hwemvura, zviyo uye chikafu chemhuka; immunobiotester yekuongororwa kwezvirwere zvemhuka nemiti; kumisikidza kwekutsvaga kwehunhu hwekuwedzera kumanikidzwa nemagetsi magetsi, pamwe nehunyanzvi hwekushandisa UAVs yekutarisa mamiriro eminda. Mainjiniya ese akagamuchira madhipuroma nekutenda kubva kumutambo weOt Vinta.
Nezve mutambo "Kubva kuVinta!"
Mutambo wepasi rese wesainzi nehunyanzvi hwekugadzira kwevana nevechidiki "Kubva kuVinta!" Yakachengetwa kubvira 2005, inoshanda pasi peiyo Ministry yeindasitiri nekutengeserana yeRussian Federation. Mutambo uyu wakave wekutanga chiitiko chakazara chekusimudzira kwevana kwesainzi nehunyanzvi hwekugadzira uye vechidiki tekinoroji bhizinesi muRussia. Nhasi chaiye "kuratidzwa kwemapurojekiti uye maitiro" kune vechidiki vagadziri uye vanogadzira vanobva kumatunhu ese eRussia nekune dzimwe nyika. Vatori vechikamu vane makore mashanu kusvika makumi matatu nemashanu vanopa mazano avo nemapurojekiti emaindasitiri akasiyana siyana. Mutambo uyu unoitirwawo mumaforamu makuru eRussia nevekunze maforamu uye kuratidzira muRussia, Italy, Germany, Austria, Poland, Slovakia, India, China, Vietnam nedzimwe nyika.
Tags: "АГРОСАЛОН 2020"
Maitiro ekugadzirira kusasa kwako kwechando